Roa lahy tratran’ny fitsaram-bahoaka: efa maty voadaroka mbola nodorana indray | NewsMada
Par Taratra sur 17/04/2019
Rehefa tapi-dalan-kakeha tsy nahita andosirana intsony, nifandrombonan’ny fokonolona nodarohana ireto roalahy, voalaza fa jiolahy. Tsy vitan’izay, mbola nodoran’izy ireo indray avy eo ny fatiny. Fitsaram-bahoaka nahatsiravina, tany Amboditavolo, Vatomandry.
Nitrangana fitsaram-bahoaka nampihoron-koditra indray tao amin’ny kaominina ambanivohitr’Amboditavolo, 25 km tsy hidirana an’i Vatomandry amin’iny lalam-pirenena faha-11A iny ary miditra kely 4 km avy ao amin’ny RN 11A no nitranga izany, ny alatsinainy maraina teo. Araka ny fampitam-baovao voaray avy any an-toerana, olona roa tsy fanta-pihaviana ary tsy mazava izay tena antony namonoan’ny fokonolona azy ireo. Fantatra fa efa hatramin’ny alahady alina no nisy fifanenjehana tamina tovolahy roa lahy lazain’ny sasany amin’ireo fokonolona fa hoe jiolahy. Avy any amin’ny zana-tanàna ivelan’Amboditavolo izy iroe no niezaka nandositra hamonjy ny Renivohitry ny kaominina ihany koa, saingy tsy afaka nandositra intsony izy reo nony tonga teo amin’ny tendrombohitra mitondra ny anarana hoe “Belela”. Raikitra ny daroka sy ny vono isan-karazany ka niafara tamin’ny fahafatesana izany. Tsy nijanona teo anefa ny hatezeram-bahoaka fa mbola tsy afa-po fa nitohy tamin’ny fandorana azy roa lahy koa izany taorian’ny famonoana.
Fanindroany nisian’ny fandorana olona tao Belela…
Tsiahivina fa efa fanindroany izao no nisian’ny fandorana olona tamin’ny alalan’ny fitsaram-bahoaka toy izao tao amin’ity tendrombohitra “Belela” ity raha ny taona 2016 ny voalohany dia izao nitranga izao indray ny fanindroany. Ny taona 2012 kosa efa nitrangana vonoan’olona mahatsiravina nihatra tamina telo mianaka tao amin’ity toerana ity ihany koa. Voalaza fa masiaka vahoaka ny ao amin’ity kaominina ambanivohitr’Amboditavolo ity noho izy hanjakan’ny asan-dahalo sy jiolahy matetika loatra, raha tsy hilaza manokana ny vaky fasana, ny halatra taolam-paty, halatra vokatra an-tsaha sy biby fiompy isan-karazany.
Momba ity raharaha fitsaram-bahoaka ity, fantatra fa voaantso eny amin’ny biraon’ny zandary ao Vatomandry ny ben’ny Tanànan’Amboditavolo. Andrasana, araka izany, ny tohin’ny fanadihadiana ity raharaha fitsaram-bahoaka tao Amboditavolo ity.
Tsikaritra fa zary lasa fahazarana ho an’ny olona indray tato ho ato ity fanaovana fitsaram-bahoaka ity ary mitondra faisana mihitsy izay tratran’izy ireo. Taratry ny tsy fahatokisana ny mpitandro filaminana sy/na fitsarana intsony? Ny atahorana amin’ny raharaha toy izao, na tondro molotra fotsiny kanefa tsy nanao na inona na inona dia mety amoizan’aina ka tokony hojeren’ny tompon’andraikitra akaiky ity firongatry ny fitsaram-bahoaka ity.